काठमाडौँ । जाने हो ?’ काठमाडौँको माछापोखरीमा टहलिँदै गरेका २३ वर्षीय गोपाल शर्मालाई युवतीले आँखामा–आँखा जुधाएर सोधिन् ।
अपरिचित युवतीको प्रश्न भुइँमा खस्नासाथ उनले अकमकाउँदै प्रतिप्रश्न गरे, ‘कहाँ जाने, कति पैसा लाग्छ ? ‘होल नाइटको दुई हजार लाग्छ, मैले चिनेको गेष्ट हाउस छ त्यहीँ बसेर रमाईलो गरौँला ।’
युवतीको यस्तो प्रस्ताव सुनेपछि रामेछापमा मिस्त्री काम गरेर केही दिनका लागि काठमाडौं आएका शर्माले चितवनकी रियाना अधिकारीलाई पछ्याए । रियानाले उनलाई टोखा नगरपालिका–९ स्थित मिलन टोलमा रहेको न्यु भुमेश्वरी एण्ड अर्जुन पाहुना घरमा लगिन् ।
पहिले एक रातको १५ सय मात्र दिन्छु भनेका शर्मा केही बेरमा रातभर बसेको दुई हजार तिर्न सहमत भैसकेका थिए । गोपालले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार गेष्ट हाउसमा पुगेपछि युवतीले उनीसँग पहिल्यै पैसा लिईन्, अनि मदिरा सेवन गर्ने प्रस्ताव गरिन् ।
रियाले ‘भजिर्न’ ब्राण्डको रक्सी पिइन् भने गोपालले बियर पिउन थाले । रक्सीले मातेपछि माछापोखरीमा भएको सहमति अनुसार रिया शारिरिक सम्पर्क गर्न सहमत भइनन् । उनले गोपाललाई आमाचकारी गाली गर्दै भनिन्, ‘मैले धेरैलाई यही होटलमा लुटेकी छु, अब केटाहरु बोलाएर तलाईं पनि लुट्छु !
’ दुई हजारमा रात बिताउने शर्तमा होटल पुगेकी युवतीले यस्तो रौद्र रुप देखाउँदै आफ्ना बैनी र आमासँग सम्पर्क गर भन्दै केटाहरुलाई फोन लगाउन खोजेपछि गोपाल रिसले चुर भए । आवेगमा आएका गोपालले मदिराले लठ्ठ रियानालाई आफ्नो काखमा सुताए अनि घाँटी थिचेर मारिदिए ।
यसरी मदिरा, सेक्स र पैसाको विवादका कारण छिनभरमै भूमेश्वरी गेष्ट हाउसको २०३ नम्बर कोठामा रियानाको प्राण पखेरु उड्यो । त्यतिबेला रातको १० बजिसकेको थियो, मृतक युवतीको दुवै खुट्टा कपडाले बाँधे, घाँटीमा युवतीकै ट्राउजर खोलेर बाँधिदिए ।
अनि गोपाल उक्त गेष्ट हाउसबाट बाहिरिए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख विश्वराज पोखरेलका अनुसार गोपाल त्यहाँबाट गंगाहल नजिकै गएर सड्कमै सुतेका थिए । भोलिपल्ट दिनभर रत्नपार्क घुमेपछि रात्रीबस चढेर नेपालगञ्ज हुँदै कञ्चनपुर पुगेका शर्मालाई कञ्चनपुर स्थित गड्डाचौकीबाट नियन्त्रणमा लिइएको एसएसपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
चैत २३ गते रियालाई कर्तव्य गरेर मारेका शर्मालाई महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जका इन्सपेक्टर विक्रम लामाको कमण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले चैत ३० गते पक्राउ गरेको हो । शर्मामाथी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भईरहेको एसएसपी पोखरेलले बताए ।
गोपाल शर्मा सल्यानको शारदा नगरपालिका–१ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी रामेछापमा मिस्त्रीको काम गर्दै आएका थिए । मृतक युवतीको यकिन घर ठेगाना अझै खुल्न सकेको छैन । माछापोखरी र नयाँ बसपार्कमा भेटिएका यौनकर्मीको बयानका आधारमा युवतीको नाम रियाना अधिकारी र घर चितवन भएको खुल्न आएको छ ।
गेष्ट हाउसको आगन्तुक पुस्तिकामा गोपालले आफ्नो नाम र थर ढाँटेर लेखेका थिए । उनले होटलको आगन्तुक पुस्तिकामा दाङको घोराही नगरपालिका–१ स्थायी ठेगाना भएका विकास ओली भन्दै झुटो नामथर टिपाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
चैत २४ गते बिहान गेष्ट हाउस सञ्चालक बिल लिएर जाँदा कोठाभित्र युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । रातो पाटिबाट साभार